Archive du 20170111
Ady amin�ny fahantrana Tsy misy mpanatanteraka, hoy i P�re Pedro
Nandritra izay 28 taona nitantanany ny toby fanarenana mahantra etsy Andralanitra na ny �Akamasoa� izay dia naneho ny heviny tetsy amin�ny Espace Dera etsy Tsiadana omaly, i P�re Pedro fa miadana loatra ny ady amin�ny fahantrana hitany eto amintsika hatreto.
PM Mahafaly Olivier Matahotra ho any Vatovavy Fitovinany
Zary tany fady an�i Solonandrasana Mahafaly Olivier ny �Grand Sud-Est� misy an�i Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana.
Randriamiarisoa Joseph �Tsy misy fanjakana eto�
Mijanona ho resabe fotsiny ireo voambolana voizina momba ny fitantanana firenena eto Madagasikara.
Sendika CUA - Ben�ny tan�na Hanamafy ny fiaraha-miasa ny roa tonta
Tonga niarahaba ny Ben�ny tan�na Lalao Ravalomanana noho ny fahatrarana ny taona vaovao 2017 tetsy amin�ny lapan�ny tan�na
Taratasin�i Jean Inona no ilana anareo ?
Miarahaba ry Jean a ! Lasa ny saiko hoe inona no ilana anareo ireto e ? Efa mba an-taonany maro ihany ianareo no niaraka taminay teto,
30%-n�ny zava-manan�aina eto Madagasikara Ahiana ho foana afaka 20 taona
Miha ratsy hatrany ny tatitra avoakan�ny avy eo anivon�ny WWF na ny sampandraharahan�ny firenena mikambana izay miompana amin�ny fikajiana ny zavaboary eto amintsika. Araka ny fanazavan�ny
Bruno Raisner Nentina any Sainte Marie ny vatana mangatsiakany
Ory avokoa ny ankamaroan�ireo mpanakanto tonga nitsapa alahelo tetsy amin�ny tranompokonolona Analakely omaly nanoloana ny vatana mangatsiakan�i Bruno Raisner, mpihira avy any Atsinanana diso fantatra tamin�ilay lohatenin-kira hoe : � Kotro-baratra �.
Fanavotana ny fanabeazana Tratra aoriana, hoy ny EDEMA
Azo lazaina ho tratra aoriana ihany ny fifohazan�i Madagasikara amin�ny fanavotana ny fanabeazana eto amintsika,
Fokontany Soanierana III - I Niampy 4 ireo trano noravana
Taorian�ireo trano 20 isa efa noravana tetsy amin�ny fokontany Soanierana III I dia fantatra fa niampy efatra vaovao indray izany omaly talata
Faritra Analanjirofo Vonona amin�ny fampandrosoana
Toy ireo faritra maro manerana ny Nosy dia vonona amin�ny fampandrosoana ihany koa ny Faritra Analanjirofo raha araka ny fanazavan�ny lehibeny Ramaroson Jacques.
Kardinaly Armand Ga�tan Razafindratandra Tsy afaka am-pon�ny mpino Katolika
Fito taona katroka ny alatsinainy 9 janoary lasa teo ny nahafatesan�ny Kardinaly Armand Ga�tan Razafindratandra, fantatra tamin�ny fitarihana ny fiangonana Katolika teto Madagasikara.
Aleo mpamosavy malemy toy izay mpandainga �
�Aza manao toy ny mpamosavy malemy ianareo, ka ny ao an-trano ihany no aripaka�, hoy ny filoham-pirenena manoloana ny fihetsik�ireo mpiara-miasa sy olona akaiky azy, izay toa mandoto sy mandefona Ivoho ny filoha sy ny fanjakana manontolo.